Ireo marika mazoto amin'ny firotsahana dia tokony hanao ireto zavatra telo ireto | Martech Zone
Na dia nihidy aza izao tontolo izao tamin'ny 2020, ny traikefa nomerika feno sary sy horonan-tsary dia nahatonga anay hifandray. Niantehitra mafy kokoa noho ny teo aloha tamin'ny fomba mahazatra kokoa amin'ny fifandraisana nomerika izahay ary nandray fomba vaovao sy zava-baovao mba hizarana ny fiainantsika sy hifandraisana amin'ny halavirana azo antoka. Avy amin'ny Zoom ka hatramin'ny TikTok sy Snapchat, dia niantehitra tamin'ny endrika nomerika fifandraisana ho an'ny sekoly, ny asa, ny fialamboly, ny fiantsenana ary ny fifandraisana amin'ny olon-tiana fotsiny izahay. Tamin'ny farany, nanana dikany vaovao ny herin'ny votoaty hita maso.
Na manao ahoana na manao ahoana ny fivoaran'ny tontolo aorian'ny areti-mifindra, ny mpanjifa dia hanohy haniriana votoaty hita maso manerana ny lafiny rehetra amin'ny fiainana.
Ny krizy COVID-19 dia nanafaingana ny fampitomboana ny fifandraisan'ny mpanjifa nandritra ny taona maro.
Mba hahatratrarana ireo zava-misy vaovao ireo amin'ny fomba mitondra mankany amin'ny vokatra ara-barotra, ny marika dia tokony hifantoka amin'ny lafiny telo amin'ny votoaty hita maso mba hananganana fifandraisana tsara kokoa amin'ny mpihaino azy.
Mamirapiratra amin'ny Microbrowsers sy ny Fifandraisana amin'ny efijery kely
Fantatrao ve fa ny fampiharana hafatra dia nihoatra ny sehatra media sosialy tao amin'ny 20% ny isan'ny mpampiasa mavitrika isam-bolana? Miaraka amin'ny mpampiasa marobe amin'ny fampiharana fandefasana hafatra manokana, manana fahafahana hanatratra ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny microbrowser ny marika ankehitriny, na ireo fijerena finday kely kely atolotry ny URL izay zaraina amin'ireo fampiharana fandefasana hafatra ireo.
Mba hanatratrarana ny mpanjifa amin'ireny fotoana finday ireny, zava-dehibe ho an'ny marika ny mamantatra hoe iza amin'ireo microbrowser no malaza amin'ny mpanjifa sy amin'ny indostria iray. In Cloudinary's 2021 State of Visual Media tatitra, hitanay fa ny iMessage no tena tian'ny marika amin'ny sehatra fandefasana hafatra – mitana ny laharana voalohany maneran-tany sy manerana ny sehatra.
WhatsApp, Facebook Messenger, ary Slack dia anisan'ireo sehatra malaza hafa voalaza fa maizina sosialy fantsona, izay mamaritra ny fizarana toa tsy hita maso izay tsy hitan'ny marika rehefa mizara rohy na votoaty ny mpiara-mianatra aminy. Ireo fahafahana mifandray amin'ny efijery kely ireo dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny isan'ny kitihina sy ny firotsahana an-tsehatra bebe kokoa, zavatra izay tsy azon'ny marika ho diso fanantenana.
Ny marika dia afaka manomana ny sariny sy ny lahatsariny ho an'ny microbrowser amin'ny alàlan'ny famahana ny filana manokana amin'ny fantsona sosialy maizina. Ny microbrowser tsirairay dia hamoaka ny fijerin'ny rohy amin'ny fomba hafa, noho izany dia tokony hanatsara sy hampifanaraka ireo sary sy horonan-tsary ireo ny marika mba hisarihana ireo kitika rohy. Miaraka amin'ny sary optimized, ny marika dia afaka manao fahatsapana voalohany tsara rehefa zaraina amin'ny fianakaviana, namana ary mpiara-miasa ny rohy.
Mizarà tantara mahasarika miaraka amin'ny horonan-tsary, horonan-tsary ary horonan-tsary bebe kokoa
Nitombo be ny fifamoivoizana video nandritra ny areti-mifindra, manome vavahady mankany amin'ny tontolo ivelan'ny zava-misy voahidy.
Nanomboka tamin'ny Janoary 2019 sy nandritra ny areti-mifindra, nitombo avo roa heny ny fangatahana horonan-tsary avy amin'ny 6.8% ka hatramin'ny 12.79%. Nitombo mihoatra ny 140% ny bandwidth video tamin'ny Q2 2020 fotsiny.
Rahona 2021 Toetran'ny haino aman-jery hita maso
Miaraka amin'ny fisondrotan'ny horonan-tsary, tsy mahagaga raha mitantana sy manova votoaty video bebe kokoa noho ny teo aloha ireo marika mba hahatratrarana ny mpanjifa. Ity fitaovana fitantarana mahery vaika ity dia azo ampiasaina amin'ny fomba maro, ao anatin'izany:
Vidéo azo amidy - Ho an'ny marika e-varotra, ny horonan-tsary azo vidiana dia afaka mitondra vokatra ho velona, ​​ary avy eo mampifandray ny mpividy amin'ny pejy vokatra mifandraika izay ahafahan'izy ireo mividy amin'izao fotoana izao.
Horonan-tsary 3D - Ny marika dia afaka mamorona sary na horonan-tsary mihetsika 360 degre avy amin'ny maodely 3D mba hamoronana traikefa miantsena maoderina sy mandray andraikitra amin'ny pejy antsipirian'ny vokatra tsirairay.
Video amin'ny mpampiasa interface tsara - Ny horonan-tsary dia azo alefa amin'ny fomba tsy ampoizina sy mamorona ihany koa, toy ny amin'ny sehatra an-tserasera ho an'ny mpanjifa izay mampiseho zavatra toy ny hevitra momba ny fomba fanamboarana na toro-hevitra haingo, manampy amin'ny famoronana traikefa marika tsy misy dikany.
Mba hampidirana ireo horonan-tsary ireo, ekipa marketing ary ireo mpamorona izay manohana azy ireo manova ny fananana video in-17 amin'ny antsalany. Ity dia dingana tena sarotra sy mandany fotoana izay mitaky ny mpamorona hitantana ny codec video amin'ny ambaratonga. Mba hitsitsiana ora an-jatony amin'ny fotoana fampandrosoana sy hamerenana an'io fotoana io amin'ny ezaka vaovao kokoa, ny marika dia afaka miantehitra amin'ny AI mba hahatonga ny dingana ho haingana sy milamina.
Ampitomboy ny fandraisan'ny finday
Ilaina ny fandraisana andraikitra amin'ny finday, indrindra rehefa misy kaonty finday eo ho eo antsasaky ny fifamoivoizana tranonkala maneran-tany. Ho an'ny marika, midika izany fa miantoka ny sary sy ny horonan-tsary ho mamaly sy optimized ho an'ny fitaovana finday. Ireo izay tsy mampiasa famolavolana mamaly ho an'ny fananany hita maso dia very fotoana hanamafisana ny laharan'ny SEO. Vitaly Google an'ny tranonkala fototra momba ny traikefan'ny mpampiasa avokoa, ary ny fanaovana laharam-pahamehana ny fandraisan'anjaran'ny finday dia hiantoka ny tranokalan'ny marika ho hita mora foana amin'ny laharan'ny fikarohana.
Averina indray, tsy asa mora izany rehefa mandefa sary sy horonan-tsary amin'ny sehatra samihafa isan'andro. Ampitomboy izany amin'ny alàlan'ny varavarankely fijerena samihafa, ny orientation ary ny fitaovana, ary mety ho asa be dia be izany. Mba hahazoana antoka fa ny zava-drehetra dia natao tsara indrindra ho an'ny tontolo voalohany amin'ny finday, ny marika dia afaka mampihatra ny famolavolana mamaly mandeha ho azy mba hanaterana ny traikefan'ny mpampiasa mitovy sy avo lenta, na inona na inona efijery na fitaovana. Miaraka amin'ny automatique, ny marika dia afaka mitondra fahombiazana bebe kokoa amin'ny fizotran'ny asa ary manatsara ny laharana sy ny traikefa amin'ny finday.
Mamorona fifandraisana tsaratsara kokoa miaraka amin'ny herin'ny fiaraha-miasa amin'ny Visual-First
Avy amin'ny areti-mifindra dia nianatra izahay fa ao anatin'ny fotoana tsy azo antoka, ny marika dia mila mahatakatra ny fomba hifandraisana sy hifaneraserana amin'ireo mpihaino kendrena. Ny microbrowser, horonan-tsary, ary tranokala finday dia hanohy hamolavola ny fomba fijerin'ny mpanjifa sy ny fifandraisany amin'ireo marika ankafiziny. Ny automatique sy AI dia ilaina amin'ny famoahana ireo traikefa ireo amin'ny ambaratonga.
Miaraka amin'ny sary eo afovoan'ity tontolo vaovaon'ny fifampikasohana nomerika ity, ireo marika dia afaka mampihatra ireo fomba fanao tsara indrindra ireo amin'ny paikadin'izy ireo amin'ny ankapobeny ary mampiakatra ny haavon'ny traikefa voalohany amin'ny maso.
Tags: 2021video 3daiautomatiquerahonagoogle core web vitalsfampiharana fandefasan-kafatramicrobrowsersfifandraisan'ny findayLahatsary findaytranokala findaymanaiky Designvidéo azo amidyhiahotrahoranareotoetry ny haino aman-jery hita masotoetry ny fampitam-baovao hita masolahatsary mpampiasa interface tsaraVideo fananan'nyvideo codecsVideo conversionfiaraha-miasa amin'ny masohaino aman-jery hita masoWhatsApp